Arrow သည် NetApp သိုလှောင်မှုကို Elevate Media Teams သို့ ၀ င်ရိုး axi ai ဆော့ဖ်ဝဲဖြင့်စုစည်းထားသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေး » မြှားမီဒီယာအသင်းများခြီးမွှောမှဝင်ရိုး ai Software များနှင့်အတူ NetApp သိုလှောင်စုအဝေးကို
မြှားဖြန့်ဖြူး (www.arrow.com/) ယနေ့ (NetApp သိုလှောင်မှုစနစ်များပေါ်တွင် အခြေခံ. ကော်ပိုရိတ်များနှင့်တက္ကသိုလ်ကဗီဒီယိုအဖွဲ့များများအတွက်ဘက်ပေါင်းစုံဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအကွာအဝေး၏ချက်ချင်းရရှိနိုင်မှုထုတ်ပြန်ကြေညာwww.netapp.com) နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုရိုး ai, Inc မှသုံးစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များပြည့်စုံဖြေရှင်းချက်စတိုးဆိုင်များကိုပေးစွမ်းသည်မှတပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းခဲ့ကြပေမယ့်စီမံခန့်ခွဲနှင့်ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာ terabytes ရာပေါင်းများစွာမှချက်ချင်းအသုံးပြုသူ access ကိုပေး။
ရိုး ai (www.axle.ai/) အခြေခံကျကျရိုးရှင်းသောမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွက်အသိအမှတ်ပြုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ဖြေရှင်းနည်းများ, ဝေစုကိုသူတို့ဖန်တီးလမ်းကိုတိုးတက်စေလျက်, install သုံးပါနှင့်တတ်နိုင်ရန်လွယ်ကူဖြစ်ကြောင်းမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကိုအကြောင်းအရာသိုလှောင် 500 အဖွဲ့အစည်းများကျော်ကကူညီပေးခဲ့ကြပါပြီ။ ဆမ် Bogoch, ရိုး ai ၏ CEO, ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာတစ်ခုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပေါက်ကွဲမှုရှိပါတယ် "ဟုပြောသည်။ သိုလှောင်မှု 100 exabytes (100 သန်း terabytes) ကျော်နှစ်စဉ်ယခုမီဒီယာသိုလှောင်မှုမှကျိန် ဆို. ပူဇော်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 250,000 ဗီဒီယိုကိုသင်း, ဖမ်းယူတည်းဖြတ်ရေးနှင့်ဤအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအီးမေးလ်ကိုသိမ်းဆည်းသို့မဟုတ်ကော်ပိုရိတ်မှတ်တမ်းများအဖြစ်ကွန်ရက်ကသိုလှောင်မှုရိုးရာအသုံးပြုမှု, ပို. ပို. မိုဃ်းတိမ်မှပြောင်းရွှေ့နေကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကြီးများနှင့်အလုံအလောက်မြောက်မြားစွာနှင့်ဖြစ်ပွားနေသောဖမ်းယူဖြစ်လာကြပါပြီမိုဃ်းတိမ်ပေါ်သို့တင်ခြင်းအားမကြာခဏလက်တွေ့ကြောင်း, ဒါကြောင့်နေရာအနှံ့ပါပဲ။ "
မြှား, NetApp နှင့်ဝင်ရိုး ai သုံးအသုံးဝင်သောသိုလှောင်မှုနေရာ configurations 100 terabytes (VM100), 200 terabytes (VM200) နှင့် 400 terabytes (VM400) အတွက်ဖြေရှင်းချက်မရရှိနိုင်လုပ်နေပါတယ်။ အားလုံးသုံး configurations မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည် 10 Gigabit Ethernet ကွန်ရက်အင်တာဖေ့နှင့် NetApp ရဲ့အစွမ်းထက်မလိုအပ်တဲ့ Fas ဗိသုကာနှင့်အတူ, NetApp ရဲ့အားကောင်းတဲ့, စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်သိုလှောင်မှုဗိသုကာပါဝင်သည်။
တစ်ခုချင်းစီကို configuration ကိုလည်းတစ်ဦးလည်းပါဝင်သည် Intel ကရိုး ai 5, ကုမ္ပဏီရဲ့ '' အခြေခံကျကျရိုးရှင်းသော 'သည်ဗီဒီယိုရှာဖွေရေးဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု 2019-အသုံးပြုသူဗားရှင်း running -based application ကို server ကို။ အဆိုပါ software ကိုမျိုးစုံသုံးစွဲသူများ tag catalog နှင့်၎င်းတို့၏မီဒီယာဖိုင်အဖြစ်အလိုအလျှောက်သူတွေကိုဖိုင်တွေအတွင်းသတ်သတ်မှတ်မှတ်အမြင်အာရုံနဲ့ audio attribute တွေပြုစုခြင်းနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာများအတွက် AI အ-မောင်းနှင်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအကွာအဝေးရှာဖွေခွင့်ပြုမယ့် browser ကိုရှေ့ဆုံးကိုပါဝင်သည်။ မကြာခဏ TERABYTES - - ဗွီဒီယိုများ၏ပမာဏပေးထားတစ်ခုတည်းရိုက်ကူးနေတဲ့ဗီဒီယိုကိုအဖွဲ့ကစုဆောင်းနိုင်, ဒီစနစ်ကသူတို့အားဖိုင်များကိုလျင်မြန်စွာရှာဖွေရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲခွင့်ပြုပါတယ်။
"အနှစ်, ဖောက်သည်များကသူတို့ရဲ့ content တွေကို, သိုလှောင်ရှာဖွေရန်နှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်ရိုးရှင်းသောနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-အကျိုးရှိစွာလမ်းဘို့လိုအပ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြပါပြီ," Bogoch ဆက်ပြောသည်။ "ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အမွေအနှစ်ဖြေရှင်းချက်စျေးကြီးပြီးရှုပ်ထွေးပါပြီ, ဒါပေမယ့် Arrow ရဲ့အထုပ်အများဆုံးသူတို့ကိုလိုအပ်သူကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ပညာရေးဖောက်သည် State-Of-The-Art AI အများနှင့်ပေးခဲ့သည် (မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲရေး) စွမ်းရည်ကိုရောက်စေဖို့စီမံခန့်ခွဲ။ ဤအအထုပ်နှင့်အတူကျနော်တို့ပြန်လည်ရောင်းချသူများ၏ Arrow ရဲ့တစ်နိုင်ငံလုံးကွန်ရက်ကတဆင့်တစ်ဦးလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဖြေရှင်းချက်များကိုပေးစွမ်းနှင့်ဗီဒီယိုသင်း၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်အဖြစ်ကသူတို့ကိုအစေခံသူအိုင်တီဌာနနှင့်တွေ့ဆုံရန်နိုင်ပါ။ "
အဆိုပါ3ဖြေရှင်းနည်းများ, VM100, VM200 နှင့် VM400, ချက်ချင်း Arrow ရဲ့အမျိုးသားရေးပြန်လည်ရောင်းချသူများကွန်ရက်မှတဆင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းစျေးနှုန်းသည်:
VM100: ဗီဒီယိုမီဒီယာ Manager ကို Entry '- $ 49,995 MSRP
VM200: ဗီဒီယိုကိုမီဒီယာ Manager ကို Midlevel - $ 89,995 MSRP
VM400: ဗီဒီယိုကိုမီဒီယာ Manager ကိုလုပ်ငန်း - $ 129,995 MSRP
အပိုဆောင်း software ကိုအဆင့်မြှင့်တင် 5- နှင့် 50-အသုံးပြုသူတိုးချဲ့ packages များပါဝင်သည်အဖြစ်မကျြနှာကိုအသိအမှတ်ပြုမှု, အရာဝတ္ထုအသိအမှတ်ပြုမှု, မိန့်ခွန်းကူးယူခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်အားကစား analysis နှင့်ဝင်ရိုး ai ရဲ့အသစ် connectr ™လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်အပါအဝင်ရိုး ai ၏ဗီဒီယို metadata ကိုန်ဆောင်မှု။
ဆော့ဝဲအစုအဝေးပေးသွင်းနှစ်ယောက်စလုံးလာမယ့်သီတင်းပတ်ရဲ့တစ်ဦးရှေ့မှောက်တွင်ရှိ NAB ပြပွဲ Las Vegas မှာ: ရိုး ai တဲ SL15116 မှာပြနေသည်နှင့် NetApp S116LMR မှာဖြစ်ပါတယ်။
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား sprockit က Ultra HD ဖိုရမ် 2019-04-05
ယခင်: ဓါတ်ပုံပညာ / ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး Internship - နွေရာသီ 2019
နောက်တစ်ခု: အမေဇုံ Winnipeg အတွက်နယူးရုံးဖွင့်လှစ်